Ukutholwa Kwesizinda: Ukuphathwa Kwebhizinisi Kwamafa Esizinda | Martech Zone
NgoMsombuluko, Agasti 8, 2016 URussell Artzt
Isiphithiphithi sicashile emhlabeni wedijithali. Noma iyiphi inkampani ingalahlekelwa kalula yimpahla yayo yedijithali esikhathini lapho ukubhaliswa kwesizinda kwenzeka ngezindlela eziningi ezahlukahlukene nalapho ukuhlangana nokutholwa kuhlala kufaka amawebhusayithi amasha kuleyo nhlanganisela.
Izizinda ezibhalisiwe futhi ezingakaze zithuthukiswe. Amawebhusayithi ahamba iminyaka ngaphandle kokubuyekezwa. Imilayezo exubile kuzingxenyekazi zokumaketha. Izindleko ezingasasebenzi. Imali elahlekile.
Izindawo zezinkampani zedijithali ziguquka njalo, futhi ukugcina ithrekhi kungaba nzima, noma kungenzeki.
Izinkampani eziningi sezivele zixakekile kulolu bishi lwedijithali.
Cabanga ngenkampani ezame ukubhalisa isizinda esithile futhi yathola ukuthi isivele ithathiwe. Ukuhlola le webhusayithi, abaphathi babona okuqukethwe okufana kakhulu nemikhiqizo yabo nezimpawu zokuhweba futhi ngokushesha umnyango wabo wezomthetho walungiselela ukuhlaselwa okungahambisani - kuphela ukuthola ukuthi isizinda sibhaliswe kwinkampani esizayo esanda kutholakala.
Kuyaqondakala ukuthi inkampani ibikhathazekile ngokuthi kunenkohlakalo eqhubekayo, futhi bebezoya ezindlekweni ezinkulu ukuyilwa nayo ngoba bebengazi ukuthi yiyo yonke le nkampani.
Lesi yisibonelo sezinxushunxushu ezikhona emhlabeni wedijithali. Kunzima kakhulu ukulandelela yonke into, yonke indawo, nokuqonda ngokugcwele lokho onakho ngempela. Idala ukudideka futhi izogcina ibiza izinkampani imali.
Kunezinye izingcuphe ezibhekene nomakethi wedijithali wanamuhla kubandakanya nabasebenzi abanobuhlakani abathuthukisa izizinda i-C-suite engazi noma ukuthumela okuqukethwe okungekho ezingeni eziteshini zenkampani ezisemthethweni.
Kungenzeka ukuthi abasebenzi baqhuba amabhizinisi abo ohlangothini kusizinda esibhaliswe enkampanini. Kungenzeka babhalise ngokwehlukana kepha bafaka imikhiqizo yenkampani noma ama-logo. Izinkampani zikuthatha kalula bazi kahle lokho abanakho ngokwamanani, kepha kuvame kakhulu ukuthi abazi.
Izingozi ezingezekile zifaka izikweletu ezingahlosiwe - ithuba elimazayo lokuthi okunye okuqukethwe kokuqukethwe kuwebhusayithi engaziwa ekujuleni kwephothifoliyo yenkampani engagadiwe kungadala inkinga.
Uma ungalawuli izizinda zakho, wazi kanjani ukuthi yini ekuzo? Uma isisebenzi esikhohlakele noma umenzeli ongagunyaziwe ebhalisa isizinda egameni lakho lenkampani futhi athumele imininingwane ehlambalazayo noma engalungile, ungabophezeleka.
Kukhona nengozi yokuthi inkampani incintisane nayo - hhayi nje ukushiya i-SEO nobunye ubuchwepheshe bokukhangisa obuqinile etafuleni, kepha empeleni kulimaza amayunithi webhizinisi ngalinye ngokuwahlela ngokungenhloso.
Isibonelo, uthi uthengisa izinhlobo ezintathu zamawijethi, zonke zakhiwe ngezigaba ezahlukahlukene zenkampani yakho. Uma ukushicilela kahle lokhu, izinjini zokucinga zizokubona njengendawo enamandla kawijethi bese zikuqhubela phezulu kohlu lwazo. Kepha ngaphandle kokudidiyelwa, izinjini zokusesha zibona izinkampani ezintathu ezinqanyulwe ngokuphelele, futhi esikhundleni sokuthola umfutho osayizi wakho, uzishaya ubuyele emuva.
Zonke lezi zinto - kusuka ezindlekweni zamarejistra wesizinda amaningi kuya ezinkampanini eziphethe izinkulungwane zamawebhusayithi angaziwa - zidala ukudideka, zinciphise ama-brand futhi ekugcineni ziyeke izinkampani ekuthokozeleni umkhondo wedijithali onobungcweti, osebenzayo nobusebenziseka kalula.
Ngaphambi kokuba inkampani ikwazi ngisho nokucabanga ngokuthuthukisa lokho kungcola, kufanele ichaze ngokuphelele. Lokho kuqala ngokubeka imephu ngokuphelele kwempahla yedijithali yenkampani, akunangqondo ngesikhathi lapho izizinda eziku-inthanethi zigudluka njalo.
"Wazi kanjani ukuthi yiziphi izinyathelo okufanele uzenze ngaphandle kokuthi wazi ukuthi yini onayo?" Kubuza uRussell Artzt, umsunguli kanye ne-CEO ye-Digital Associates. "Uma usunalo lolu lwazi, ungathatha izinqumo ezihlakaniphile mayelana nokulungisa kabusha indawo yakho yedijithali."
Faka Ama-Digital Associates, inkampani yokumaketha edijithali esiza amaklayenti aqonde imvelo yawo yedijithali ngaphambi kokuncoma isenzo. Enhliziyweni ye-Digital Associates yi-Domain Discovery, umkhiqizo omusha okwazi ukuthola zonke izizinda ezibhaliswe kwinkampani ethile. Isebenzisa i-database enamandla yomhlaba wonke yezizinda ezingaphezu kwezigidi ezingama-200 nezinkampani eziyizigidi ezingama-88, nezizinda ezintsha eziyisigidi ezingezwe isonto ngalinye.
I-Domain Discovery yisixazululo sesoftware esesabekayo esibuyekeza izinkampani zomhlaba eziyizigidi ezingama-88 kanye nezizinda ezingaphezu kwezigidi ezingama-200 ezibhalisiwe - ngesigidi esengeziwe esingezwa ku-database masonto onke - ukunquma umkhondo wedijithali wenkampani.
I-Scalable kumabhizinisi wabo bonke osayizi, iDomain Discovery isebenzisa imininingwane yayo yenkampani ukuthola imininingwane eningiliziwe, yezinkampani ezingaphezu kwezigidi ezingama-88 emhlabeni wonke - konke kusuka kumakheli e-IP kuya ezinombolweni zocingo kubaphathi be-C-Suite - ukukhomba ukubhaliswa okungenzeka ungaphuthelwa amathuluzi avamile okusesha wesizinda.
Lapho inkampani iziyiqonda kahle izimpahla zayo zedijithali, abakwaDijithali Associates bangahlaziya ukusebenza kwale nkampani ku-inthanethi bese benza isu lokuxhumanisa imiyalezo yokuthengisa, ukunciphisa izindleko zedijithali nokwandisa inzuzo.
Yilezo zinkampani ezinesibambiso ku-footprint yazo ephelele yedijithali ezophumelela emnothweni wanamuhla. Njengamanje, noma kunjalo, izinkampani eziningi aziqapheli ukuthi banesibambo esincane kangakanani kwimpahla yabo yedijithali nokuthi ukusebenzisa amanye amasheke nezilinganiso zobuchwepheshe kungenza kanjani umehluko.
Tags: abangane be-digitalukutholakala kwesizindaukuphathwa kwesizindaizizindaukuphatha izizinda
URuss Artzt ungumsunguli kanye ne-CEO ye Ama-Digital Associates, ngubani kanye noVince Re, oyiChief Technologist, abasungule izixazululo zesoftware ezenzelwe amafu ukusiza amabhizinisi akwazi kahle imvelo yawo edijithali.